Fitantanam-pitondrana · Avrily, 2020 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Avrily, 2020
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Avrily, 2020
Azia Afovoany sy Kaokazy 30 Avrily 2020
Tranga fanararaotan'ny fanjakana hanehona ny heriny ny COVID-19, kanefa mampibaribary ny fahalemeny ihany koa.
Ao Kolombia, mitombo ireo hetsika fiaraha-mientana mandritra ny valanaretina maneran-tany COVID-19
Amerika Latina 28 Avrily 2020
Saika ny antsasaky ny mponina ao Kolombia dia miankina amin'ny asa tsy ara-dalàna avokoa.
Mpanao gazety an-tserasera notazonina noho ny nanatsongany ny torohevitry ny praiminisitra Kambodziana momba ny COVID-19
Azia Atsinanana 22 Avrily 2020
"Tsy tokony ampiasaina ho antony hanilihana mpanao gazety izay tsy manaraka anjambany ny fanjakana ny krizin'ny Covid-19."
Afrika Mainty 13 Avrily 2020
Nanantena ilay "superstar" Olaimpika Eliud Kipchoge fa efa niandry fatratra ny hifaninana amin'ny Lalao Olaimpika 2020 ao Tokyo izy. Saingy misy dikany aminy ny fanemorana. "Miaina ao anatin'ny tontolon'ny fanjavozavoana isika," hoy ny nolazainy.
Azia Atsinanana 09 Avrily 2020
"Betsaka ny olona tezitra amin'ireo parlemantera satria na dia ny mpitsabo, ny infirmiera, ny mpamilin'ny fiara mpitondra marary - ireo olona tena akaikin'ny marary - aza dia tsy atao fitiliana."
Mitohy amin'ny fanagadrana mpanao gazety ny famoretana ny mpanohitra any Alzeria
Alzeria 06 Avrily 2020
Herintaona mahery taorian'ny nanombohan'ny fihetsiketsehana manerana ny firenena tany Alzeria nitakiana ny fanavaozana ara-politika sy ara-toekarena dia mbola nanohy ny paikadiny amin'ny famoretana ihany ny governemanta mba hampanginana ireo mpitsikera sy mpanao gazety.
Afrika Mainty 02 Avrily 2020